CAD / GIS मा एक नेटबुक परीक्षण गर्दै - Geofumadas
फेब्रुअरी, 2009 जियोस्पाटियल - जीआईएस, IntelliCAD, मितोल्ड GIS, Microstation-बेन्टले
केहि दिन अघि मैले परीक्षणको बारेमा विचार गरेकी थिए कि यस्तो नेटबुकले भौगोलिक वातावरणमा काम गर्दछ, यस अवस्थामा मैले एसर वनको परीक्षण गर्दैछु जुन केही ग्रामीण प्राविधिकहरूले मलाई शहरको भ्रमणमा किन्न आग्रह गरे। परीक्षणले मलाई यो निर्णय गर्न मद्दत गर्दछ कि मेरो अर्को अधिग्रहणमा मैले अर्को उच्च प्रदर्शन HP मा लगानी गर्दछु वा यी नयाँ समाधानहरू व्यावहारिक हुन सक्छन्।
यी मशीनहरू प्रशोधन गर्ने प्रक्रियाहरूका लागि डिजाइन गरिएका छैनन् जुन उनीहरूको पर्याप्त क्षमता छैन।
RAM मेमोरी 1GB
10 स्क्रिन ''
यो तीन USB पोर्टहरू, डेटासेट पोर्ट, ताररहित जडान, एकाधिक कार्डहरू र अडियो / माइक्रोफोनको साथ आउँछ।
किबोर्ड थोरै सानो छ, दुई औंलाले लेख्नेहरूका लागि कुनै समस्या छैन (कुखुरा खाने कुखुराको रूपमा) तर यदि हामी केटाकेटीहरू थियौं हामीले टाइप गर्ने पाठ्यक्रम लियौं, तपाईं केही समयका लागि यस बानीमा जान सक्नुहुन्छ। केहि आक्रोशित स्क्रोल कुञ्जीहरू र औंलाको साथ माउसको ह्यान्डलिंग जुन आधा विलम्बित छ; दायाँ तान्नेसँग जुम कार्यक्षमता छ तर बटनहरू थिच्न अति गाह्रो हुन्छ; मलाई लाग्छ बाह्य माउसको साथ काम गर्नु राम्रो हुन्छ।
यो कडा परिश्रमका लागि टिम होईन भनेर निर्णय गर्ने मुख्य कारण यो हो कि आँखालाई थाम्ने पर्दाको आकारको कारणले यो यात्रा गर्नु राम्रो हो तर भेक्टर र कालो पृष्ठभूमिका साथ नरिवल भंग गर्न आठ घण्टा खर्च गर्न ... मलाई लाग्छ यद्यपि यो अफिसमा प्रयोग गर्ने मामलामा मोनिटर जडान गर्न पोर्ट छ।
सफ्टवेयरको लागि, यो आउटलुक XP, जुन कम स्रोत खपतको लागि राम्रो छ, यो होम संस्करण प्रो संस्करण हो जुन आईआईएसको साथ आउँदैन ... मानफल्डको लागि खराब। यो अफिस २०० 60 को -०-दिनको संस्करणको साथ पनि आउँदछ, र यदि झिंगाले माइक्रोसफ्ट वर्क्स ल्याउँदछ जुन सधै माइक्रोसफ्टबाट आएको हुन्छ तर धेरै कम मूल्यमा।
CAD सँग काम गर्दै
मैले यो माइक्रोस्टेशन जियोग्राफिक्स V8 मा चलाएको छु, ODBC मार्फत पहुँच डाटाबेसमा जडित। सज्जनहरू, यो धेरै असुविधा बिना काम गर्दछ, Bentley नक्शा भारी महसुस गर्दछ तर चरम छैन।
लोड गर्दै छ ११ .Ew ओर्थोफोटोस प्रत्येक ११ एमबीको, खराब छैन। २२ क्याडास्ट्रल नक्शा dgn १: १००० ... कुनै समस्या छैन।
तिनीहरूलाई hmr मा एक ecw रूपान्तरण ... ओह! यहाँ राम्रो सुरु हुन्छ, यसमा रहेको मेशिनको उच्च प्रदर्शन छैन तर अन्ततः यसले २:२१ मिनेटमा हासिल गर्यो, यसले एक इक्वि लाई M एमबी बाट १2M एमबी एचएमआरमा परिवर्तन गर्‍यो, एक बेतुक रूपान्तरण, मलाई थाहा छ तर यो ढाँचा माइक्रोस्टेशनमा एकदम छिटो चल्छ। मलाई लाग्दैन कि टिफको साथ काम गर्न यो वजनको कारणले आदर्श छ, तर यो एक आईटीआईफ़ विकल्प हुन सक्दछ जुनसँग अतिरिक्त क्षमताहरू छन्।
निश्चित रूपमा, माइक्रोस्टेशनको यो सानो मेमोरी ठीक छ, यद्यपि त्यहाँ अन्यहरू छन् जसमा एनभीडिया कार्ड छ जुन निश्चित रूपमा उनीहरूको राम्रो परिणाम छन्।
हल्का प्रोग्रामहरूका लागि, माइक्रोस्टेशन जस्ता म यसलाई राम्रोसँग देख्दछु। मलाई लाग्दैन gvSIG ले यसको भर्खरको परिवर्तनहरूसँग काम गर्दछ जबसम्म केटाले स्रोतहरू खपतलाई अनुकूलन गर्दैन धेरै तहहरूको साथ काम गरेर वा OGC सेवाहरूमा जडान गरेर।
मेरो सन्तुष्टिले कस्तो असर पार्छ, म सन्तुष्ट छु: मैले लोड गरेँ Microstation V8, BitCAD, Gif, Avira, माइक्रोसफ्ट काम गर्दछ, लाइभ लेखक, Foxit y क्रोम। एक हप्ता पछि म एक लगातार यात्री, ब्लगर र CAD / GIS प्रशंसक को रूप मा सन्तुष्ट छु ... धेरै नराम्रो यो उधारो थियो।
To 400 को लागि यस खेलौना लायक छ, म यसलाई एक खराब लगानीको रूपमा देख्दिन, तर फिर्तालाई विचार गर्नुहोस् जुन अरूले आशा गर्न सक्छन्। यो एक राम्रो वैकल्पिक सोच हो कि यसलाई जैकेट वा ज्याकेटको आन्तरिक झोलामा बोक्न सकिन्छ किनभने आकार एजेन्डाको हो, जबकि यसलाई फोल्डरको बीचमा लैजानु सुरक्षित हुन्छ, तर यसमा टार्गस ब्रीफकेस बोक्नु भन्दा कम जोखिम हुन्छ। वातावरण जहाँ सबै अपराधीहरु आफू भित्र रहेको ठाने।
तपाईंले कन्फसहरू पनि विचार गर्नुपर्दछ, किनकि यसको वजन त धेरै व्यवस्थित छ, सीड्रोम नराखी यस सहयोगीलाई अतिरिक्तको रूपमा समावेश गर्नुपर्दछ; GB जीबी युएसबीको साथ, कार्यक्रमहरूको स्थापना यति जटिल देखिँदैन तर यदि यसलाई ढाँचा गर्न आवश्यक थियो वा यसलाई अपराधिक भाइरसबाट डिटोक्सिफाई गर्न ... मसँग मेरो शंका छ। यदि हामी AA ब्याट्री वायरलेस माउस र ग्राफिक्स ट्याब्लेट थप्छौं ... यो १ 8 जत्तिकै भारी हुने सम्भावना छ।
यदि तपाइँ एक उच्च प्रदर्शन पीसी किन्नु भएको छ भने, ती $ 500 कम्प्याकहरू २ GB को रम भन्दा बढि छन्, इंटेल डुओ र व्यक्तिगत ग्राफिक्स कार्डको साथ। सत्य यो हो कि छोटो समयको लागि जुन नेटबुकहरू एसूसबाट आएका थिए, साढे एक वर्षमा हामीसँग यी सूक्ष्म ढाँचाहरूमा धेरै मजबूत मेशिनहरू हुनेछन्।
वेबसाइट: Acer Aspire One
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो म लैटिन अमेरिकी रिकवरी कांग्रेस
अर्को पोस्ट AutoCAD सिविल 3D, बाह्य डेटाबेसबाट आयात बिन्दुहरूअर्को »
Rep जवाफ "CAD / GIS मा एक नेटबुक टेस्टिंग" को लागी
यो निर्भर गर्दछ, यदि यो व्यायामको लागी मात्र हो भने, तपाइँले धेरैलाई कम महसुस गर्नुहुन्न।
तर यदि यो धेरै काम गर्न छ भने, कि उपकरण पर्याप्त छैन, यो ढिलो हुन्छ र आँखाको टाढा आँखा टायर।
नमस्ते, यस्तो, धेरै राम्रो रिपोर्ट मैले मेरो खरिद गर्नु भन्दा धेरै संदेह पाउँछु। म तपाईलाई एक प्रश्न सोध्छु, म भिजुअल एसभिडियो 2010 र स्वत: डेटा पढ्दैछु, के तपाई सोच्नुहुन्छ कि त्यस मेनुको साथ तपाईंले राम्रो काम गर्न सक्नुहुनेछ?
यकीन छ कि यो चलाउन सक्षम हुनुपर्दछ किनभने यी संस्करणहरू धेरै हल्का थिए, मलाई लाग्छ कि यो पनि 2002 संस्करणहरू यस मेनुमा राम्रो हुन सक्छ।
माफ गर्नुहोस्, तपाईंलाई थाहा छ कि यदि AutoCad 2000i साधारणतया चलाउन सक्दछ (3d को केहि पनि यस प्रकारको नोटबुकमा)।
नमस्कार र धेरै राम्रो ब्लग
एकैछिनमा एकैछिनमा एकैछिनमा रमाईलो लागेकी थिइन।
म यसलाई वर्कस्टेशनको रूपमा प्रयोग गर्दिन, विशेष गरी किबोर्डको कारण, यद्यपि यो असुविधाजनक छैन यदि तपाईं एक लामो समयको लागि त्यहाँ हुनुभयो भने टायर हुन्छ।
अर्कोतिर मेरो जस्तै एक टोलीमा, XP Justito हुनेछ र जसरी पनि मलाई मनपर्दैन। मैले कमबेरियनसँग डेबियन राखेको छु र मेरो चाहनाको लागि हल्का र चिसो काम गर्दछ। इन्टरफेस, मेल, च्याट, कागजात लेख्नुहोस् र यदि आवश्यक हुन्छ धुम्रपान गर्नुहोस्।
यो वरदानको रूपमा मैले शिकायत गरेनन, अब म निश्चित रूपमा एक ब्याट्रीको साथ हेर्न चाहन्छु, शायद थप र राम र यदि एक इन्च अधिक स्क्रिन आवश्यक छ भने।6वा7घण्टाको स्वायत्तताको साथमा यो बग एउटा वास्तविक आनन्द हो।
जे भए पनि घरमा पहिले नै म १ 19aको एक मोनिटर राखेको छु, जसलाई म «सानो» चश्मा call भन्छु।